Kyaw Zay Moore - Personal Blog
« Secure boot enable to install Windows 11
ခုရက်ပိုင်း ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး အိမ်မှာတူမ ပုံဆွဲနေတာတေမြင်နေတွေ့နေရနဲ့ facebook youtube မှာ sketch ပုံဆွဲတာတွေ မြင်ပီ အဲ ဗီဒီယိုတွေတိုင်းလိုက်ဆွဲကြည့်ရင်း ပိုးကဝင်သွားတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းတည်းကတော့ ပုံဆွဲစိတ်ဝင်စားပေမယ် အဲလောက်ထိတော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့..
« What is Code Coverage? Secure boot enable to install Windows 11 »
Test Coverage နဲ့ Code Coverage ကွာသေးလားတော့မသိဘူး ခု ဖတ်ကြည့်တဲ့
guru မှာဖတ်ပီးသိရတာတော့ coverage အဓိက major method က ဒါတေရှိတယ်
« Covid 19 Third wave or Seasonal flu visit to home? Drawing Sketch »
« Crypto currency What is Code Coverage? »
« How to host asp.net application on iis Crypto currency »
Google Play In App Purchase With Telenor Bill »